Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Fenway Hotel dia nanambara ny Tale Jeneraly vaovao
Fenway Hotel any Dunedin, Florida dia mandray an'i Michael (Mickey) Melendez ho tale jeneraliny vaovao
Fenway Hotel dia miantso an'i Michael Melendez ho mpitantana jeneraly vaovao
Melendez vao haingana no niasa tamin'ny naha-tale jeneralin'ny The Daytona, Autograph Collection
Melendez dia manana traikefa amin'ny fandraisam-bahiny 17 taona mahery, nanomboka ny asany niaraka tamin'i Columbia Sussex
Fenway Hotel any Dunedin, Florida, dia nanambara androany ny fanendrena an'i Michael (Mickey) Melendez ho mpitantana jeneraly vaovao azy. Melendez dia hanara-maso ny fandraisana mpiasa vaovao sy fiasa isan'andro ao amin'ny Hotel Fenway manan-tantara. Nifindra tany amin'ny morontsiraka atsinanan'i Florida i Melendez, izay toerana niasany farany ho mpitantana jeneralin'ny The Daytona, Autograph Collection.
"Ny zavatra niainan'i Michael isan-karazany sy ny fomba nitaomany tsara dia nahatonga azy ho tonga soa eto Fenway sy ny fianakaviana Mainsail lehibe kokoa," hoy i Joe Collier, filoha, Mainsail Lodging & Development. "Fotoana sarotra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany ity ary ny fahitana mazava sy ny fahazarana amin'ny fitantanana fananana Autografie dia hahafahany mitana andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny Grand Lady."
Melendez dia manana traikefa amin'ny fandraisam-bahiny maherin'ny 17 taona, nanomboka ny asany niaraka tamin'i Columbia Sussex, toerana niasany hatramin'ny bellman ka hatramin'ny talen'ny asa. Niditra fitantanana niaraka tamin'ny Shaner Hotel Group izy, izay toerana naha mpitantana foibe ny fananana maro manerana ny atsimo atsinanana, ao anatin'izany ny Couryard Jacksonville Beach Oceanfront, Durham Marriott City Center, sy ny hafa. Tamin'ny toerany vao haingana indrindra, i Melendez dia nanokatra sy niasa ho mpitantana jeneralin'ny The Daytona, ary talen'ny talen'ny fikambananana tao amin'ny Playa Largo Resort & Spa, izay mpikambana ao amin'ny Autograph Collection malaza an'i Marriott. Melendez dia nanatrika ny Oniversite Coastal Carolina any Myrtle Beach, South Carolina, izay nahazoany ny mari-pahaizana momba ny Hospitality & Management Management.
Nisokatra tamin'ny 1927, Fenway Hotel dia sary famantarana tamin'ny vanim-potoana jazz, mampiantrano ireo mpikaroka, mpanakanto, mpanao politika, mpitendry mozika ary angano velona tamin'ny androny tamin'ny naha-hotely fandidiana azy. Heverina ho ny "firafitra sarobidy indrindra teo amin'ny tantara" tao Dunedin, ilay trano fandraisam-bahiny koa dia tranon'ny onjam-peo voalohany tao amin'ny Pinellas County, izay nanomboka nandefa fandaharana avy teo an-tampon'ny Fenway tamin'ny 1925. Androany, misy hotely sy efitrano fandraisam-bahiny 83 ny hotely; HEW Parlor & Chophouse, misy ny fanapahana ny chophouse, ny fanomanana fizaran-taona atolotry ny chef ary ny angon-drakitra whisky sy Scotch betsaka; Hi-Fi Rooftop Bar izay mijery an'i St. Joseph Sound; 10,000 XNUMX metatra toradroa natokana ho an'ny hetsika anatiny sy ivelany, ahitana ny Caladesi Ballroom misy fomba fijery rano; pisinin-dàlana ala fisakafoanana; ary ny bozaka malalaka manerantany ho an'ny hetsika.
Alao i Malta amin'ny efijery lehibe